Kanjani ukuthi bakhethe "Yandex Isiphequluli"? Kuthiwani uma pop up izikhangiso kusiphequluli sakho?
Kunengqondo, ayesuka ebukele ithelevishini kuya yokufuna baqaphela ngokwengeziwe futhi uyakhetha kolwazi - okungukuthi, i-Internet, siyakwazi ekugcineni khulula kusukela ukukhangisa ezingadingekile futhi awayiphazamisi. It hhayi kuphela dissipates ukunakwa, kwakuphazamisa kusukela main, kodwa uma ngikhuluma iqiniso ecasulayo. Nokho, ukuze ukuzisola yethu, World Wide Web ukuhweba motor yayiyindawo, ngisho lokho! Kufanele ngokuphelele ukuya kunoma website - futhi ezimweni eziningi ngokushesha pops up ukukhangisa: kusiphequluli "Yandex" futhi Firefox, i-Chrome futhi Interet Explorer - akunandaba yini isofthiwe oyisebenzisa - zizenzakalele wakhe ukufihla. Ingabe akukho indlela ukulondoloza ulwazi oluningi awayiphazamisi alikho? Kungani, zikhona izindlela zokuxazulula izinkinga, futhi kukhona eziningana. Ake sibheke izindlela eziyisisekelo indlela ukukhubaza isikhangiso ku "Yandex Isiphequluli".
Ukususa ukukhangisa iphoqa isiphequluli
Qala sipho ngokuqondile izilungiselelo isiphequluli. Ukuqalisa le ndlela, okudingayo ukufinyelela ku-intanethi. Vula isiphequluli sakho bese ulandela imiyalelo elandelayo:
Ekhoneni eliphezulu kwesokudla uphawu Thola onesihloko esithi "Amathuluzi" (noma sebenzisa Alt sekhibhodi + X) kanye ohlwini evelayo, khetha "Izinketho ze-Internet."
Sidinga ithebhu "Okuthuthukisiwe". Lapha, ewindini Properties, ungakwazi ukulungisa izilungiselelo ezithile-Inthanethi - vumela noma vimbela izenzo ezithile.
Kulokhu, sifuna ukuvimbela ukukhangisa "Yandex" (isiphequluli, okuyinto thina esetshenziswa). Thola "Isikhombi" futhi ususe imifanekiso kusukela amaphuzu alandelayo:
Google Izithombe emakhasini ewebhu;
play umsindo emakhasini wewebhu (uma kunesidingo);
khombisa isithombe ozimele;
ukuvumela amakhodekhi esikhundleni izakhi multimedia.
Ukususa okungenhla, chofoza "Sebenzisa" inkinobho. Manje ngeke kukuphazamise izigelekeqe njalo agqoke izikhangiso banner, kanye neminye imisindo noma amavidiyo. Ngaphezu kwalokho, emakhasini website azolayisha ngokushesha kusukela konke okuqukethwe ezingadingekile ikhubaziwe.
Yini engalungile indlela isiphequluli esakhelwe?
Le ndlela, naphezu alula kanye lula, has a abalulekile kakhulu (futhi kwabaningi ezibucayi) icala. Ngu kokuvala ngale ndlela yokukhangisa, awukwazi ukubona futhi izithombe ofuna, kanye namavidiyo elindile "Yandex Isiphequluli". Ngakho-ke, kufanele lisetshenziswe kuphela ezimweni ezimbi kakhulu futhi kuphela "minimalists kweqiniso."
Ukusetshenziswa izijobelelo ukubhekana okukhangisa "Yandex Isiphequluli"
Uma oxhumana naye indlela yokuqala kubhekwe kwaba kakhulu kuwe, ungalilahli ithemba. Indlela yesibili sendlela ukukhubaza ukukhangisa "Yandex Isiphequluli" lifaneleka ngaphezulu. Sikhuluma plug ekhethekile. Kukhona izinhlobonhlobo eziningana zazo, kodwa sizogxila ezisetshenziswa kakhulu.
Inketho yokuqala - ukufakwa kwe-plugin ye-Flash Block
Asiqale nge superstructure ngokuthi Flash Block. Isebenza kanjani? elula kakhulu. Kusukela udinga kuphela ukufaka lolu hlelo lokusebenza kukhompyutha yakho bese uyisebenzise emsebenzini, okunye uzokwenza i-plugin uqobo. Lapho isiphequluli iqala, kungaba ukukhubaza izikhangiso kumasayithi "Yandex" ekuvimbeni ngokuphelele konke okuqukethwe Flash ekhasini is ukulayishwa. Ukusebenzisa uhlelo Flash Block, uyoba extricate ukuziqhelelanisa zonke izinhlobo izimakethe njalo izigelekeqe kanye amabhanela ukukhanyisa.
Amanothi ku ukunwetshwa
Ububi kulesi simo, futhi, kukhona: cishe, wena ngeke kutholakale imidlalo ahlukahlukene isiphequluli - bamane ziyeke ukusebenza. Ungakwazi ukuxazulula le nkinga: Ngemva kokufaka i-plugin udinga kudingeke wenze izinguquko ezithile. Ukuze amasayithi athile, ungavumela ukulanda ukuhanjiswa, uma kudingeka ngempela. Ngale ndlela ukuqeda engadingeki okuqukethwe ukukhangisa kodwa usazokwazi ukubuka amavidiyo ezithakazelisayo / izithombe kanye imidlalo egijima.
Eyesibili inketho - "sobudala" phakathi Adblock Plus izijobelelo
Sekuyisikhathi ukuya kwelinye anezele ethandwa kakhulu futhi ewusizo ngempela - i-plugin Adblock Plus. Le software iye yasungula isikhathi eside, ngo-2002, lapho ukuzalwa senzeka Runet kuphela, kodwa ngokuhlathulula ukusebenza kwawo (inguqulo ethuthukisiwe, vele) akaphelelwa namuhla. Adblock Plus add-kukuvumela ukuqeda ngokuphelele kuzo zonke zokukhangisa ezingaba zikufice nathi World Wide Web: akusiwona nje banner izikhangiso, izimakethe kanye izigelekeqe, kodwa futhi ukukhangisa kokuqukethwe, kanye nezinye izinhlobo zawo.
Ngakho, indlela ukukhubaza ukukhangisa "Yandex Isiphequluli" ngosizo lolu hlelo? Okokuqala, udinga ukufaka kukhompyutha yakho. Ungalanda it on the website esemthethweni, lapho uyobe ukhethe isandiso kusiphequluli sakho esetshenziswa - kulesi simo, "Yandex". Kufanele kuqashelwe ukuthi i-plugin kudinga izihlungi ekhethekile - namuhla basuke ngokuvamile kakade ezakhelwe isofthiwe isofthiwe okuzenzakalelayo. Njalo is lemifanekiso ejwayelekile Easy ohlwini, ngokuvamile okwanele ukusebenzisa kwakhe kuphela. Uma kudingekile, ungalanda nokuhlunga ezengeziwe, equkethe eziningi izicelo ukubonisa okuqukethwe ukukhangisa.
Ngemva Adblock Plus ifakiwe, udinga ukhethe isihlungi, okuyinto sizosebenzisa ukuvimba ukukhangisa "Yandex Isiphequluli". Ngosizo izilungiselelo etholakalayo, ungakwazi ukuvimbela kuphela ukukhangisa ocabanga ezingadingekile futhi ngokweqile awayiphazamisi, kokushiya amabhlogo ewusizo. Uma uqaphela banner noma isithombe, ezithiya ubheka ikhasi lewebhu, chofoza inkinobho yegundane kwesokudla bese ukhetha isenzo "Vimba Image". Manje endaweni lapho ngaphambili okwakukhona kulo iyunithi isikhangiso ukuba isikhala esingenalutho. I-plugin usebenza izinga eliphezulu kakhulu - ezimweni eziningi ungenalo ngisho ukuqagela ukuthi esikhathini esithile ngaphambili ikhasi lewebhu behlaliswe okuqukethwe ukukhangisa.
Izici kanye Izinzuzo Adblock Plus-add-on
Ukunwetshwa Adblock Plus kuzokuvumela ukudala uhlu lwakho amasayithi ngokuwangeza ku uhlu emnyama noma emhlophe uwedwa. Ngesikhathi lock umyalezo wokukhangisa kwibha yekheli yesiphequluli sakho uzobona isithonjana ngawo ungaphuma okuqukethwe evaliwe unomphela, noma ukuyivumela kule sayithi. Yiqiniso, ukusetshenziswa lesi sengezo uzokwenza iwebhu ngokushesha futhi kumnandi kunokuhamba ngezinyawo esimweni lapho isiphequluli pops up izikhangiso futhi isusa ukunaka kwakhe okuqukethwe ewusizo zamakhasi ewebhu.
umkhiqizo Modern yokulawula ukukhangisa - Adguard
Ngithanda ukunitshela olunye uhlelo samanje kwezikhangiso Ukuvinjwa ku "Yandex". Kuyinto okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi ewusizo kakhulu uma kanyekanye zisebenzisa iziphequluli eziningana ezahlukene (Firefox, Safari, i-Chrome, i-Internet Explorer). Adguard ke ngokuthi isandiso - kuyasiza kalula nangempumelelo ulwe zonke izinhlobo yokukhangisa, ukugxila lwezinhlobo ezivame kakhulu yayo RuNet. Akukona nje banner izikhangiso, ividiyo nombhalo amabhlogo, kodwa futhi ezokuxhumana ezixubile, kanye nezinye eziningi - eziphambili kakhulu futhi eyinkimbinkimbi zezinto eziphilayo yayo.
Izici ukunwetshwa Adguard
Isicelo lusebenza ngendlela efanele, yonke imisebenzi lwenziwa ngemuva, ngakho-ke akuveli ukuphazamisa umsebenzisi kusukela imisebenzi yakhe Inthanethi. Kukhona isiphequluli module okhethekile elikuvumela ukukhiya izilungiselelo ngesandla (okwamanje ukusetshenziswa isiphequluli). Esakhelwe ngaphakathi isihlungi inikeza self-lokulawula kwemigomo Adguard plugin. Enye plus ocacile, okuyinto ebaluleke bonke abaphethe 3G-imodemu, - yokonga abalulekile traffic. Esibonakalayo application izilimi eziningi, kuhlanganise kukhona usekelo version Russian zohlelo. Ngokuvamile, Adguard - alternative uyakufanelekela ukuthandana ne Adblock ethandwa.
Yikuphi ethulwa izindlela zokukhangisa ukuvala shaqa ukukhetha?
Ngakho, siye sacabangela eziningi yezindlela eziphumelela futhi kuqhathaniswa okulula indlela ukuhlukana wena hype kwi-inthanethi futhi wenze okuphequlula iwebhu kujabulise futhi ngokushesha. Indlela elula uma kwenzeka ukuthi njalo pops up izikhangiso ku "Yandex Isiphequluli" iyona ukuhlela izilungiselelo yangaphakathi. Nokho, kunamathuba amancane ewusizo kubasebenzisi jikelele futhi akuzona njengoba nezimo njengoba kwenza bonke abanye (njengokuhlaba ukukhangisa kukwenza kungenzeki ukubuka okuqukethwe ewusizo). Indlela ephumelela kakhulu futhi esebenzayo ngezinto ezingokoqobo lanamuhla kubasebenzisi abaningi indlela kokufaka i-plug ekhethekile. Lapha kukhethwa incike esikuthandako. Iseluleko sethu - sebenzisa efakazelwe eminyakeni isandiso Adblock Plus, noma zama entsha, kodwa lwenteke kahle Adguard plugin. Buhle yalezi izandiso zisobala: ikhono lokukhetha okuqukethwe ukubonisa, kuhlanganise ewusizo amayunithi, futhi manual Ilokhi hype.
Kungani ukukhangisa - ngaso sonke isikhathi okubi, noma lapho okuqukethwe yokukhangisa akudingekile ukuvimba
Ngaphambi kokuthi uqede lesi sihloko, Ngithanda ukwengeza amazwi ambalwa mayelana isimo, uma uvula isipheqi sivuleka ukukhangisa, kuyisidina ngakho, kodwa ngokuqinile langena ezimpilweni zethu. Inkonde ngayinye ifakwe umshini eziningi amawebhusayithi kuwo njalo futhi ngezikhathi ezithile iza injongo ethile. Lokhu kungaba ukuqeqeshwa noma ngisho ukukhishwa kwanoma yimuphi umsebenzi, isitoreji, yokubuka amabhayisikobho noma ikuphi okunye ukuzijabulisa, njalonjalo. Njengoba yaziwa, iningi amasayithi ukusebenza futhi "uhlala" ngokuyinhloko ngokusebenzisa ukukhangisa. Abakhangisi ukubeka ulwazi lwabo ngokungenakusiza indawo uthola imali kwi yesikhulumi yabo. Khubaza isikhangiso bakhonze, wena wayencisha amathuba zakho ozithandayo web isisetshenziswa ukuze uthole. Omunye (noma cha) ngosuku uyomane shaqa ... Ngiyavuma, esimweni esingajabulisi. Ingabe ufuna lokhu? Ngakho-ke, ngaphambi kokuba wena uvala ukukhangisa "Yandex Isiphequluli", cabanga lapho empeleni esiphazamisayo, kanye nokuthi ungayithola kuphi hhayi nje unake show wakhe. Kuyinto kule sikusize-plugin ngenhla. Ukukhetha Ukuqaphela okuqukethwe - ukukhetha okunengqondo iningi umsebenzisi wanamuhla!
Line (lokusebenza): Izibuyekezo
Indlela ashise i umfanekiso we-ISO ukuze abezindaba?
Uhlelo kangcono design ingaphakathi: i Uhlolojikelele, incazelo kanye nokubuyekeza
Indlela ukususa "Yambler" kusukela "-Google Chrome"? Beginners Manual
Indlela ukupheka unyaluthi iphalishi ubisi? Izimfihlo nezici ezifihlekile
Wesibeletho phambi zabasebenzi. wesibeletho phambi zabasebenzi
Bangaki amantongomane nawe ungadla ngosuku? Ngilusizo kuka amantongomane ngoba emzimbeni?
Iresiphi ye-brushwood ne-vodka, ngaphandle kwe-vodka no-ukhilimu omuncu
Amethyst Engaqondakali: sezindawo imilingo amatshe
Izinwele Mask "uLonda": ukunakekelwa kanye nokudla
Gregory Lemarchal: Biography, empilweni yakho, isithombe, ukuphakama, isisindo
Uchungechunge oluthi "Champion": nabalingisi uzokutshela ukuthi ukugcina uthando